रुपन्देहीमा जलाइएको अवस्थामा पुरुषको शव फेला : ‘जम्बो’ नामक कुकुर किन दाैडियो सीमातर्फ ? – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. रुपन्देहीमा जलाइएको अवस्थामा पुरुषको शव फेला : ‘जम्बो’ नामक कुकुर किन दाैडियो सीमातर्फ ? – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
रुपन्देहीमा जलाइएको अवस्थामा पुरुषको शव फेला : ‘जम्बो’ नामक कुकुर किन दाैडियो सीमातर्फ ?
रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका ७ गरगट्टी (मर्चवार क्षेत्र) स्थित दानव नदीको किनारमा एक पुरुषको शव फेला परेको छ ।
सीमादेखि करिब ५ किलोमिटर टाढा जलाइएको अवस्थामा ३५ वर्षीय पुरुषको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले जनाएको छ । शवको सनाखत हुन सकेको छैन । प्रहरीका अनुसार शव फेला परेको स्थलमा प्लास्टिकको पाइप र पेट्रोलको बोतल बरामद भएको छ ।
‘शव बरामद भएको घटनास्थल हेर्दा अज्ञात ठाउँमा हत्या गरेर सवारी साधनमा शव ल्याएर पहिचान लुकाउनका लागि त्यहाँ जलाएको जस्तो देखिन्छ’ रुपन्देहीका एसपी प्रविण पोखरेलले भने, ‘तर, घटनाको वास्तविकता पोस्टमार्टमा रिपोर्ट र थप अनुसन्धान पछि मात्र खुल्नेछ ।’
प्रहरीले शवको पोस्टमार्टमका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा पठाएको छ । प्रहरीका अनुसार हत्या गरिएको व्यक्तिको शरीरमा कुनै चोटपटक देखिएको छैन ।
शव फेला परेपछि प्रहरीले तालिम प्राप्त कुकुरबाट घटना पहिलाउन खोज्दा कुकुरले घटनास्थल सुँघेर साढे ३ किलोमिटर नेपाल-भारत सीमातर्फ पछाएको एसपी पोखरेलले बताए ।
जर्मन शेफर्ड प्रजातिको ‘जम्बो’ नामक प्रहरीको तालिम प्राप्त कुकुरले सीमातर्फ पछ्याएपछि घटनाको ‘कनक्सेन’ सीमातर्फ पनि रहेको प्रहरीको बुझाइ छ । सीमापारी हत्या गरी वारी ल्याएर शव जलाएको वा अपराधी सीमातर्फ फरार भएको लगायतका आशंका रुपन्देही प्रहरीको छ । प्रहरीले सीमातर्फ र शव बरामद भएको घटनास्थल दुवै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
तालिम प्राप्त कुकुर ‘जम्बो’ ले करिब एक महिना अघि कपिलवस्तुमा भएको एक हत्या घटनाका मुख्य अभियुक्तलाई समेत पहिचान गरेको थियो । जुन घटनाको गुत्थी कपिलवस्तु प्रहरीलाई ‘जम्बो’ को सहायताले नौ घण्टामै सुल्झाउन सहज भएको थियो ।
हत्यारा पत्ता लगाउनका लागि ‘जम्बो’ अब्बल कुकुर मानिन्छ । ‘जम्बो’ को विज्ञता ट्रयाकर अर्थात् सुँघेर पत्ता लगाउनेमा हो । रुपन्देहीमा अनुसन्धानका लागि ‘जम्बो’ लाई नेपालगंजको कोहलपुर इकाईबाट ल्याइएको थियो ।
शवको सनाखतका लागि स्थानीयलाई शव देखाइए पनि सनाखत हुन सकेको छैन । हत्या गरिएको व्यक्तिको साथबाट मोबाइल लगायत अन्य कुनै पनि कागजपत्र फेला नपर्दा प्रहरीलाई सनाखतमा बाधा पुगेको छ ।
‘बरामदको शवको साथबाट कुनै पनि किसिमको कागजपत्र वा मोबाइल फेला नपर्दा सनाखत गर्नमा समय लागिरहेको छ’, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका अनुसन्धान अधिकृत एवं प्रहरी निरीक्षक केशव केसीले भने, ‘सनाखत भएमा अपराधीलाई छिट्टै पक्राउ गर्न सफल हुन्थ्यौ, जसका लागि अहिले हामीले शवको सनाखतका लागि तिव्र गतिमा काम गरिरहेका छौँ ।’
बरामद शवको उमेर समूहको ‘मिसिङ केस’ तर्फबाट पनि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । प्रहरीले ‘डेथ बडी’ को सनाखतका लागि विभिन्न जिल्लामा परिपत्र गर्नुका साथै विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ । अन्नपुर्ण पोस्टबाट साभार
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको January 22, 2021 February 4, 2021 118 Viewed